San Pedro de Alcántara, akụ dị na Costa del Sol | Njem zuru oke
Njem zuru oke | | España
N'ịbụ nke dị nso na cosbelpolitan Marbella, San Pedro de Alcántara na-anọchite anya ndị na-abụghị, ya bụ, obi iru ala nke a Spanish obodo. Ntọala ya dị nso nso a, ebe amụrụ ya dị ka mpaghara ọrụ ugbo na Marquis del Duero na 1860, ebe ọ bụ otu n'ime oge kachasị elu.
Ugbu a, obodo Malaga pụtara maka ụlọ ọcha ya na ịnwe ọrụ niile dị na ndị bi na puku iri atọ na ise. Agbanyeghị, n'agbanyeghị agbanyeghị ntọala otu narị afọ na iri ise gara aga, ọ na-enye gị ihe ncheta na-atọ ụtọ ma dịkwa mma gburugburu iji nwee ọ enjoyụ na okike.
1 Ihe ị ga-ahụ na San Pedro de Alcántara
1.1 Paleo-Christian basilica nke Vega del Mar
1.2 Roman Romans nke Las Bóvedas
1.3 Chọọchị San Pedro de Alcántara
1.4 Obodo nke San Luis
1.6 Onye Acoụrụma
2 Ihe ị ga-eme na San Pedro de Alcántara
3 Ihu igwe na San Pedro de Alcántara
4 Ihe ị ga-eri na San Pedro de Alcántara
Ihe ị ga-ahụ na San Pedro de Alcántara
Ndi mmadu bi na Malaga nwere otutu ebe ic ghaghi ileta, site na ihe omumu ihe ochie paleochristian na roman na ụlọ ndị so na ụlọ ọrụ ụlọ ihe nketa. Na ihe ncheta ndị ọzọ na-atọ ụtọ.
Paleo-Christian basilica nke Vega del Mar
Ga - ahụ mkpo ndị a n'ọnụ mmiri Osimiri Guadalmina, na mpaghara ebe ụzọ Roman Herculean na-agafe, nke jikọtara Cádiz na Cartagena. Ka ọ dị ugbu a, a naghị echekwa atụmatụ basilica ahụ, na-egosi ahụ nke atọ naves na abụọ apses ọzọ. Ọ e wuru n'etiti XNUMXth na XNUMXth na narị afọ AD na-azọrọ na ọ ga-abụrịrị akụkụ nke obodo Cilniana, Otú ọ dị, ọ dịghị ihe àmà e nwere banyere ịdị adị ya.
E nwekwara necropolis n'ebe ahụ. N'aka nke ọzọ, ihe nketa niile achọtara yana ozu ndị a (ili ili, arịa, ọla na arịa ili) dị na National Archaeological Museum nke Madrid. Basilica bụ Ihe ncheta akụkọ ihe mere eme site na 1931.
Roman Romans nke Las Bóvedas
Nwere ike ileta ileta ha mgbe ị na-aga basilica, ebe ha nọ naanị narị mita ise na ya. Ọ bụ octagonal ụlọ, na asatọ ụlọ gburugburu a Central ụlọ, na-ụbọchị dị n'etiti XNUMX na nke XNUMX narị afọ mgbe Christ.
Ewubere ya na ihe siri ike ya mere o jiri diri ule nke oge di nma. Na mgbakwunye, o nwere peculiarity na a na-echekwa uko ụlọ ya. Kemgbe 1936 ọ bụ ihe ncheta mba na kemgbe 2007 Akụ nke Mmasị Omenala.
N'aka nke ọzọ, n'akụkụ mmiri ọkụ ị ga-ahụ a ụlọ elu ụlọ Ewubere na narị afọ nke XNUMX dị ka akụkụ nke ụlọ nche ndị na-achịkwa mbata nke ndị ohi si North Africa n'ụsọ osimiri. Ogologo ya dị mita iri na atọ na ntọala ya nwere dayameta nke asatọ.
Chọọchị San Pedro de Alcántara
Ewebata na 1869, ọ na-aza ụdị nke colonial o nwere ihu ụzọ pụrụ iche nke nwere ụlọ elu nke yiri nke prismim nke Portichuelo de Antequera. Ọ nwere atụmatụ basilica ma bụrụ otu n'ime ụlọ ole na ole fọdụrụ site na ngalaba ọrụ ugbo mbụ nke kpatara ọnụ ọgụgụ ndị dị ugbu a.
Obodo nke San Luis
Owuwu ya malitere site na 1887 dika ulo nke ezi na ulo Cuadra Raoul, onye nwechara ogbe a n’afọ 1874. Ọ chọrọ iju anya n’ihi na o nweghị ihe jikọrọ ya na ụdị ndị Andalus. Kama, ọ na-aza Frances nke oge ahụ. O nwere akụkụ ụlọ akụkụ anọ yana elu atọ. A na-ekpuchi elu ụlọ ahụ ma nọrọ n'okpuru ya enwere dormers atọ a na-achọghị mma. Ga-ahụ ụlọ a n’ụzọ dị mfe dịka ọ bụ ugbu a oche nke Ọchịchị Mayor.
Ewezuga usoro ihe ochie nke anyị kọwaara gị, nke a nwere ike bụrụ ihe owuwu kacha ochie na San Pedro de Alcántara, ebe ọ bụ na e wuru ya tupu ntọala nke ógbè ahụ. Kpọmkwem, ọ bụ site na 1823 na ọrụ ya bụ ime shuga. Otú ọ dị, e mechara rara ya nye ugbo-nlereanya, bụ́ ụlọ akwụkwọ ndị ọsụ ụzọ na-akọ ugbo nke sụrụ ụzọ na Spen.
Ekwesiri ikwu na mpaghara a emeela ya shuga ruo ọtụtụ narị afọ ebe ọ bụ na ọ bụ otu n'ime ebe ole na ole na Europe ebe ọnọdụ kwesịrị ekwesị dị maka osisi a. Taa ị ga-ahụ ebe ọdịbendị na ụlọ a.
Ebe ọ bụ na shuga juru ebe niile, ógbè ahụ hiwere ngwongwo a na 1871. N'ezie, ọ bụ molasses n'onwe ya mere brandi. Thelọ ahụ nwere oghere akụkụ anọ na ụlọ elu toro ogologo. Ma, karịa ihe niile, ya facade, nke ejiri oke nwere acha ọcha na acha anụnụ anụnụ chọọ ya mma yana ihe enyemaka ndị ọzọ.
Ihe ị ga-eme na San Pedro de Alcántara
Obodo Malaga nwere ọmarịcha ihe ebe ị pụrụ ịnụ ụtọ anyanwụ na oké osimiri. N'otu aka ahụ, enwere eme mkpagharị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kilomita anọ ogologo nke jikọtara na Puerto Banús na ebe ị ga-ahụ ọtụtụ ụlọ mmanya na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ withụ nwere ọtụtụ ihe nkiri.
Ma, ọ bụrụ n’ịchọrọ ịga ije, ị nwekwara ike ime ya na Boulevard ma ọ bụ site na Parque de los Tres Jardines. Karịsịa, ị nwere ọmarịcha ụzọ ụkwụ na Sierra Blanca. Dịka ọmụmaatụ, nke na-agbago na Cruz de Juanar, nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mita XNUMX n'ịdị elu, na nke na-arịgo elu La Concha.
Ihu igwe na San Pedro de Alcántara
Ma obodo ma dum Marbella ebe nwere subtropical mediterranean ihu igwe, nke nwere ezigbo oge oyi na oge ọkọchị. Oke mmiri a pere mpe ma kwa afọ, kwa afọ, ihe dị ka ogo iri na asatọ. N'aka nke ya, awa anwụ na-acha kwa afọ fọrọ nke nta ka ọ ruo puku atọ. Ya mere, oge obula diri gi nma ileta obodo Malaga, obu ezie na onwa kachasi nma bu nke june na septemba, mgbe ihu igwe dị mma ma ọ bụghị dị ka ọ dị ọkụ na July ma ọ bụ August.
Ihe ị ga-eri na San Pedro de Alcántara
Gastroronomy nke mpaghara a adighi iche na nke ndi ozo nke Costa del Sol Dika mpaghara ala gbara osimiri okirikiri, nri ya dabere na ohuru azu. Maka ịkwadebe ya, e nwere nri iri abụọ ị ga-anwale. Otu bu "Eghe eghe, nke na-ewe ụta azụ, ịnyịnya ịnyịnya na ọbụna mullet uhie dị ka akụrụngwa. Ma nke ọzọ sardine skewer, nke a na-akwadebe site na ịtinye ha n'osisi ma ghee ha n'ọkụ.
Gazpacho bụkwa nri mpaghara, salmorejo na ndi ajoblanco. Nke ikpeazụ bụ ofe oyi nke nwere mmiri, mmanụ oliv, galik, nnu, achịcha na almọnd. Mgbe ụfọdụ, a na-etinyekwa mmanya gbara ụka na ya ma na-ata iberibe egusi ma ọ bụ mkpụrụ vaịn. Banyere ihe ụtọ, ị ga-anụ ụtọ achịcha mmanụ, nke borrachuelos na mmanya mmanya.
N'aka nke ọzọ, na obodo Malaga enwere a nnukwu ụlọ oriri na ọ .ụ .ụ nke ahụ abụghị naanị inye gị nri mpaghara. Nwekwara ike ịnụ ụtọ nri mba ụwa na ọbụna nri sitere na gastronomy nke oge a.
Na mmechi, enwere ọtụtụ ihe San Pedro de Alcántara ga-enye gị. Ikwesighi ileta ohere ileta ọmarịcha ebe a na Malaga. Onweghi ihe ga - adọpụ obodo ndị ọzọ ama ama na Costa del Sol dị ka Mijas, Nerja, Fuengirola, Benalmádena ma ọ bụ Torremolinos.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » San Pedro de Alcantara
Zọ mbata na Vatican
Niagara Falls Tour si New York